Dowlada oo dooneysa tallooyin qubaro oo ku aadan qoysaska kala taga. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dowlada oo dooneysa tallooyin qubaro oo ku aadan qoysaska kala taga.
La daabacay torsdag 9 augusti 2012 kl 10.13
Dowlada ayaa dooneysa in ay sammeyso kooxo caawiya waalidiinta kala taga ee waxa la yiraahdo ’’ separate’’ iyada oo hay’ada adeega bulshada ay socon doonto sidii kooxahaasi loo sammeyn lahaa.
–Waxaan ognahay in kala taga waalidka uu horseedo khilaafyo fara badan waxayna saammeysaa caruurta. Hindisa aan ka fekereyna ayaa ah in laga hortago oo la yareeyo khilaafaadka ka dhasha kala taga reeraha, ayay tiri Maria Larsson oo ah wasiirka arrimaha caruurta iyo waayeelka.
Hay’ada bulshada ayaa la socon doonta qorshahan cusub ee qoysaska kala taga sidii loo abaabuli lahaa iyada oo aragtida jirta ay tahay in qorshaha soo sammeeyaan dad isugu jira qof sharci yaqaan ah, qof deymaha tala ka bixiya iyo qof ku xeel dheer arrimaha qoyska.
Maria Gregell oo ah la taliye qoys oo sharciyeysan ayaa sheegeysa in ay jiraan qoysas badan oo soo doonta in la caawiyo marka xiriirkooda uu noqodo mid buuq gala.
In badan ayaa rabta in ay caruur dhasho, mehrad shaqo abuurtaan ama in muddo kooban dhexdeeda ku gaaraan darajo sare. Hase yeeshee intaasi ma qabsoomi karto marka qofka uu mishaakil dhex galana waxuu ilaabayaa in qeybo badan oo muhiim ah noloshiisa, ayay tiri , Maria Gregell.
– Waxaa jira su’aalooyin fara badan oo soo baxaya oo ah xag dhaqaalo iyo sharci oo la xiriira xaalada caruurta. Waxaa soo baxeysa su’aal la xiriirta hoyga iyo kumanaan su’aal haddii qofka uu helayo dad aqoon u leh oo ka caawiya, waxay ila tahay in ay wax ka tareyso sidaasi xaaladda adag ee qofka markaasi uu galayo, ayay hadalkeeda sii raacisay Maria Gregell.
Sanad walba caruur gaareysa 50 000 ayaa waxaa kala taga waalidiintooda. Iyada oo inta badan la iska ilaaboxagga dhaqaalaha ee caruurta. Ujeedada waxay tahay in waalidiin badan ay bixiyaan lacagta kaalmada caruurta, aya tiri maria, ayay tiri Maria Larsson oo ah wasiirka arrimaha caruurta iyo waayeelka.
– Inta badan waxaa laga hadlaa cida qaadeysa mas’uuliyada caruurta laakiin waxaa ognahay in dhibaatada dhaqaalana ay muhiim tahay iyo wax tarka caruurta ee mas’uuliyada dhaqaale ee labada dhinac ee caruurta dhashay, ayay tiri wasiirada.